Drafitr’i Hong Kong Mba Hamongorana Tsikelikely Ny Varotra Vangin’elefanta Amin’ny Tsena Anatiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2016 13:03 GMT
Ho fanampin'ny varotra anatiny ara-dalàna, misy tsena maizina lehibe tsy ara-dalàna momba ny vangin'elefanta. Ny taona 2013 monja izao, nahatratra sy nitazona 8.041 kilao (maherin'ny 17.700 pounds) anà vangin'elefanta nampidirina an-tsokosoko nalefa tany Hong Kong ny sampandraharahan'ny fadintseranana. Araka ny antontan-taratasin'ny Filankevitry ny Lalàna, eo amin'ny 60 isanjaton'ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna ampidirina an-tsokosoko any Hong Kong no mifarana any amin'ny taniben'i Shina. Ny sasany amin'ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna ihany koa mandeha any amin'ny tsena antsinjarany ao anatiny, izay misy mpanjifa maro ho an'ireo vokatra lafo vidy ho an'ireo mpizahatany any amin'ny tanibe.
Taorian'ny fanambaran'i Shina hoe hanao fibahanana tanteraka ny vangin'elefanta izy, nampiditra drafitra hampandehanana haingana ny lalàna mandrara ny fanafarana sy fanondranana avy any ivelany ny vokatra azo amin'ny fihazana elefanta ny Filoha Mpanatanterak'i Hong Kong, Leung. Nilaza ihany koa izy fa hokarohan'ny fanjakana amin'ny fomba mavitrika ireo fepetra hafa entina hanafoana miandàlana ny varotra vangin'elefanta ao anatiny.
Nasehon’ny fanadihadiana navoaka ny taona 2014, fa namono elefanta Afrikana 100.000 isa ireo mpihaza biby tsy ara-dalàna, tao anatin'ny telo taona monja (tao anelanelan'ny 2011 sy 2014).
Lahatsary Nafenina Mampibaribary ny Tsy Mety Tamin'ny Seraseranà Vangin'elefanta avy tamin'ny WildAid amin'ny Vimeo.
Ny taona 2014, nahatratra 2.100 dolara Amerikana isaky ny kilao eo ho eo no vidin'ny vangin'elefanta tsy mbola nasiam-panodinana any Shina amin'ny ambongadiny, ary ny volana Novambra 2015 vao nidina 1.100 dolara Amerikana. Mahatonga ny tsena maizin'ny vangin'elefanta ho indostria ambanin'ny tany mitentina dolara an-tapitrisany maro ireo tarehimarika ireo.
Araka ireo tatitry ny media, tsy mbola nametraka fanamarinana isan-taona mikasika ny habetsahan'ny tahirinà vangin'elefanta voarakitra any an-tànan'ireo mpivarotra mahazo alàlana mihitsy ireo manampahefanan'i Hong Kong, na nanamarina sy nanaramaso ireo boky firaiketan'izy ireo ny varotra natao. Izany no mahatonga ny vangin'elefanta tsy ara-dalàna miditra antsokosoko mahita ny làlany mora foana eny amin'ny tahalan'ny fivarotana.